URoblox urhaxa abaphuhlisi ngeekhomishini ezihlukumezayo | IPhone iindaba
URoblox utsala abaphuhlisi ngeekhomishini ezihlukumezayo
UMiguel Hernandez | | Android, Ukhuphiswano
Kuninzi okutshiwo malunga nokufaneleka okanye ukusetyenziswa gwenxa kwesabelo esimalunga ne-30% yetotali iyonke ethi iApple isebenza kwintengiselwano eyenziwa nge-iOS nakwiVenkile yeApple. Umrhumo, kwelinye icala, ngumgangatho womzi mveliso.
Iikhomishini ezithi iRoblox ihlawulise abaphuhlisi abanikezela ngeemveliso zabo zedijithali ngokucacileyo iphezulu kunezinye iinkampani. Umbuzo ngoku ngulo, baya kuthini abafana kwiMidlalo ye-Epic ngayo? Yonke into ibonisa ukuba abadali be-Fortnite kunye neentshatsheli zentengiso yasimahla yedijithali abazukuphazanyiswa yile nto.
Uphando lwakutsha nje lwe Abantu Benza Imidlalo Nge-19 ka-Agasti kwaye ipapashiwe kwisitishi sakhe se-YouTube singena kulo mbandela. Uninzi lwenu luyazi, iRoblox inemali yayo ebonakalayo ebizwa ngokuba yiRobux, kwaye le yinxalenye yengxaki. Ngokwezibalo, kwitransekshini yeRoblox, i-26% iya kuhlala ikhomishini, i-9% yotyalo-mali kwiqonga kunye ne-14% yokubamba nenkxaso. Kule nto siyongeza ukuba imali ebonakalayo yeRoblox ixhomekeke kwikhomishini yeVenkile yeApple yeApple okanye kwiVenkile yeGoogle Play. Iziphumo kukuba phantse i-27% yexabiso lilonke lomsebenzi ocingelwayo ngumthengi ekugqibeleni liya kufikelela kumakhi.
Njengoko unokuthelekelela, elona nani likhulu labadali ngaphakathi kweRoblox ikakhulu ngabantu, kude neenkampani ezinkulu ezifuna ukutyebisa ubukhosi bazo, njengoko kwenzekileyo ngomhla wayo phakathi kweMidlalo ye-Epic kunye neApple ngenxa yengxoxo malunga neFortnite. Abanye abaphuhlisi bachaza ukuba benze iidola ezingama- $ 350 ngokufumana izinto ezixabisa i-1.000, XNUMX yeedola, into enzima ukuyicinga, kodwa ayikho enye indlela abanokukhetha ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Ukhuphiswano » URoblox utsala abaphuhlisi ngeekhomishini ezihlukumezayo
IPodcast 13x01: Sibuyele ukuhlalutya ihlobo elishushu